Pita Nke Mbụ 2:1-25
Ka okwu Chineke na-agụ unu agụụ (1-3)
Nkume dị ndụ ndị a na-eji mmụọ nsọ arụ ka ụlọ (4-10)
Unu dị ka ndị mba ọzọ n’ụwa a (11, 12)
Ndị e kwesịrị ịna-erubere isi (13-25)
Kraịst gosiri anyị otú anyị ga-esi na-esosi nzọụkwụ ya ike (21)
2 N’ihi ya, wepụnụ aka n’ihe ọjọọ niile,+ n’aghụghọ niile, nakwa n’ikwu okwu azụ niile. Unu abụla ndị ihu abụọ, unu emekwarala ndị ọzọ anyaụfụ. 2 Ka okwu Chineke, nke dị ka mmiri ara a na-agwaghị agwa, na-agụ unu agụụ otú ahụ ọ na-agụ ụmụ ọhụrụ+ agụụ ịṅụ ara nne ha. Ọ ga-eme ka unu tozuo etozuo, a zọpụtakwa unu,+ 3 n’ihi na unu ma nke ọma na Onyenwe anyị dị obiọma. 4 Ndị mmadụ ajụla onye bụ́ nkume dị ndụ,+ ma Chineke ahọrọla ya, ọ pụkwara iche n’anya ya.+ Mgbe unu kweere na ya, 5 unu ghọrọ nkume dị ndụ. A na-ejikwa mmụọ nsọ arụ unu ka ụlọ,+ ka unu bụrụ ndị nchụàjà dị nsọ, ka mmụọ nsọ duzie unu ịchụ àjà+ Chineke ga-esi n’aka Jizọs Kraịst nabata.+ 6 N’ihi na e dere n’Akwụkwọ Nsọ, sị: “Ana m adọnye otu nkume na Zayọn. Ọ bụ nkume a họọrọ, nkume ji ụlọ, nke dị oké ọnụ e ji tọọ ntọala. E nweghịkwa onye nwere okwukwe na ya a ga-emechu ihu.”*+ 7 N’ihi ya, ọ pụrụ iche n’anya unu maka na unu kweere na ya. Ma ọ pụghị iche n’anya ndị na-ekweghị na ya. Akwụkwọ Nsọ kwuru na “nkume ndị na-arụ ụlọ jụrụ+ aghọọla nkume ji ụlọ”+ 8 na “nkume na-akpọbi ha ụkwụ nakwa oké nkume na-akpasu ha iwe.”*+ Ha na-ada n’ihi na ha anaghị eme ihe okwu Chineke kwuru. Ọdịda a ha na-ada bụkwa ụgwọ ọrụ ha. 9 Ma unu bụ “agbụrụ a họọrọ, ndị eze bụ́kwa ndị nchụàjà, mba dị nsọ,+ ndị pụrụ iche Chineke họọrọ,+ ka unu wee kwusaa n’ebe niile na Chineke dị mma.”+ Ọ kpọpụtara unu n’ọchịchịrị ma kpọba unu n’ìhè ya dị ebube.+ 10 N’ihi na o nwere mgbe unu na-abụghị ndị Chineke, ma ugbu a, unu bụ ndị ya.+ Unu bụbu ndị Chineke na-emereghị ebere, ma ugbu a, o meerela unu ebere.+ 11 Ndị m hụrụ n’anya, unu dị ka ndị mba ọzọ na ndị bi nwa oge n’ụwa a.+ M na-agba unu ume ka unu na-agbara ihe ọjọọ+ ndị unu* na ha na-alụ ọgụ+ ọsọ. 12 Na-akpanụ àgwà dị mma mgbe unu na ndị mba ọzọ nọ,+ ka ọ ga-abụ, ha na-asịgodị na unu bụ ndị ọjọọ, ha enwee ike ịhụ ihe dị mma unu na-eme+ wee too Chineke n’oge ọ ga-enyocha ndị mmadụ. 13 Jirinụ maka Onyenwe anyị na-erubere ndị niile ụmụ mmadụ họpụtara isi,+ ma eze,+ n’ihi na ọ karịrị unu, 14 ma ndị gọvanọ, n’ihi na eze họpụtara ha ka ha na-ata ndị ọjọọ ahụhụ ma na-aja ndị ọma mma.+ 15 N’ihi na Chineke chọrọ ka unu na-eme ihe dị mma ka unu nwee ike imechi ọnụ ndị na-anaghị ele ihe anya otú kwesịrị ekwesị, ndị na-ekwu okwu ọjọọ gbasara unu n’ihi na ha dị nzuzu.+ 16 Na-ebinụ ndụ ka ndị nweere onwe ha.+ Ma, unu ejikwala maka na unu nweere onwe unu na-eme ihe ọjọọ,+ kama na-ebinụ ndụ ka ndị ohu Chineke.+ 17 Sọpụrụnụ ụdị mmadụ niile.+ Hụnụ ụmụnna niile n’anya.+ Tụọnụ egwu Chineke.+ Sọpụrụnụ onye eze.+ 18 Ka ndị ohu na-erubere ndị nwe ha isi, na-akwanyekwara ha ùgwù,+ ma ndị nwe ha hà bụ ezigbo mmadụ, na-elekwa ihe anya otú kwesịrị ekwesị, ma hà bụ ndị ọ na-esi ike imete mma. 19 N’ihi na ọ bụrụ na mmadụ na-edi ahụhụ ọ na-ata mgbe a na-akpagbu ya maka na ọ na-agba mbọ ka akọnuche ya na-arụ ọrụ otú Chineke chọrọ,+ ihe ya ga na-amasị Chineke. 20 Olee uru ọ bara na unu na-atachi obi mgbe a na-ata unu ahụhụ maka ihe ọjọọ unu mere?+ Ma, ọ bụrụ na unu na-atachi obi mgbe a na-ata unu ahụhụ maka na unu mere ihe dị mma, ọ na-amasị Chineke.+ 21 N’eziokwu, Chineke họọrọ unu ka unu na-eme otú a, n’ihi na Kraịst n’onwe ya tara ahụhụ maka unu.+ O gosiri unu ihe unu ga na-eme ka unu na-esosi nzọụkwụ ya ike.*+ 22 O meghị mmehie ọ bụla,+ o kwughịkwa ihe ga-eduhie onye ọ bụla.+ 23 Mgbe a na-akparị ya,*+ ọ naghị akparịgwara.*+ Mgbe ọ na-ata ahụhụ,+ o nweghị onye ọ baara mba, kama ọ hapụrụ okwu niile n’aka Chineke, onye na-ekpe ikpe+ ziri ezi. 24 O buuru mmehie anyị+ n’ahụ́ ya mgbe a kpọgidere ya n’osisi,+ ka anyị wee sepụ aka ná mmehie ma na-eme ihe dị mma. “Ahụ́ e merụrụ ya mekwara ka a gwọọ unu.”+ 25 N’ihi na unu dị ka atụrụ kpafuru akpafu.+ Ma ugbu a, unu alaghachikwurula onye ọzụzụ atụrụ+ na onye na-elekọta mkpụrụ obi* unu.
^ Na Grik, “a ga-emenye ihere.”
^ Ma ọ bụ “oké nkume nke na-eme ka ha daa.”
^ Ma ọ bụ “ka unu na-eme nnọọ ka ya.”
^ Ma ọ bụ “a na-ekwujọ ya.”
^ Ma ọ bụ “ekwujọgwara.”
^ Ma ọ bụ “na-elekọta ndụ.”